I-Bentley I-model, ukusebenzisana nge-ODBC - Geofumadas
I-imodeli isiphakamiso seBentley sokwandisa ukuboniswa kweefayile ze-dgn, kunye nokukwazi ukuhlalutya, ukubonisana nokugqamisa i-XML ebandakanyekayo. Nangona kukho iiplagi ezidibeneyo kunye ne-AutoDesk Revit kunye ne-iPad, mhlawumbi iimpawu ezidalwa kwi-Windows 7 scanner kunye nabafundi be-pdf zibonakala kakhulu kule nqanaba elitsha.
Ukukhuphela ezi iplagi, kufuneka ufake iWare yekhasi yezicelo ze-Bentley Systems ukusebenzisana. Kufuneka ukuba ube ne-akhawunti yeBentley SELECT, ukuba ungenayo enye, ubhalise okanye ucele ukuba ukhumbule iphasiwedi kwi-imeyile yakho. Isicelo sokukhuphela sibizwa ngokuba ngumqhubi we-ODBC ye-Windows 7, kukho abanye abaqhubi, abanye kwi-beta version.
I-imodeli yifayile ye-dgn, oye waba ezenziwe yiyiphi na isicelo seBentley (I-Microstation, iBentley Imephu, iGeopak, njl.), Enokuhluka zinezinto ezihambelana nama-xml nodes, ukuze ifundwe kwaye ihlaziywe inkqubo eziqhelekileyo zokusetyenziswa, njenge-yolwazi, Excel, Outlook, kuquka i-Windows 7 isiphequluli.
Ayikho yonke iinguqulelo zeBentley inokuvelisa i-I-model, kwimeko yomgca we-geospatial, inokuyenza Bentley Imephu, kodwa kungekhona Bentley Power View.
Makhe sibone kule meko, indlela ukufikelela kwi-I-model isebenza ngayo kwisikhonkco se-ODBC
Yakha i-ODBC kwi-Windows 7
Akukho nanye yale nto ikhoyo kwiinguqulelo phambi kweWindows 7, ukususela ngoku kukho ubuninzi be-32 njenge-bits 64. Emva kokuba i-installer ikhutshwe, kuxhomekeke kwinguqulo yakutshanje inalo igama dodd01000007en.msi iyenziwa kwaye ilungile:
Xa ufaka iPhaneli yokuLawula, kwizixhobo zolawulo kunye neMithombo yeDatha ye-ODBC, kuya kubonakala ukuba sele kunokwenzeka ukwenza umntu omtsha osebenza njengebhuloji ukuze afunde i-models. Apha ucacisa igama lofikelelo, inkcazo kunye nefolda apho iifayile ze-dgn ziqulethwe khona.
Emva kokuba i-ODBC idalwa, ifumaneka kwi-Access, Excel, i-SAP Crystal Reports, ukusuka kwi-VBA okanye nayiphi na esinye isiseko esisekela i-ODBC. Oku, ngokusebenza, ukufuduka kwemveli mslink, eyaziwa kuphela nge-Bentley, kwi-node ye-xfm ehlanganiswe njenge-node ye-xml kwaye yinto elula ebizwa ngokuba yi-I-model. Into enzima yokwenza izicelo zeBentley, kukuba akunakuyenza kwi-VBA eyinkimbinkimbi ukuhlalutya i-dgn, kuba awukwazi ukubona i-mslink kunye nolwazi oluyisiseko oluhanjiswa kwitafile yekhonkco.
Kwimeko ye Excel
Ukufikelela kuyo, kwiTebhu yedatha, khetha Eminye Imithombo, ngoko Ukusuka kwiDatha yoNxibelelwano lweWebhu, I-ODBC DSN kwaye ke umthombo wedatha.
Qaphela ukuba xa ukhetha ifayile ye-dgn, uyakubona ngathi yayiyiziko ledatha, zonke izinto ezikuyo. Ukumangalisa, ukuba sikhumbula ukuba ekuqaleni XFM Kwakunzima.
Idatha ifike phakathi kweelitha ezingachazwa kwinkqubo. Xa ungaphakathi ngaphakathi kwi-Excel, unokwenza imisebenzi efunekayo evumelayo.
Ukuba senza oko kuFumaneka
Ukusuka kwi-Access ungazenza okungakumbi, kungekhona nje ukungenisa; xa sifuna kuphela ukudibanisa njengetafile yangaphandle:
Kwiphepha Izixhobo zeTable, sikhetha Idatha yangaphandle, ngoko Kaninzi, Idatha yeODBC. Nasi sigqibo Qhagamshelana nomthombo wedatha ngokwakha itafile edibeneyo kwaye kukho, iDNG yethu ibonwe kwi-Access.
Nantsi kunokwenzeka ukuba udibene nabo ngesinye isiseko, njengokuthi, umzekelo, iziqendu zeemaphu kwisiseko sentela. Oku kugcina unxibelelwano oluchanekileyo lwemephu ngesiseko, ngoko ke imigangatho yobungqina, iingxelo, njl njl. Ingadalwa.
Ukusuka kwi-SAP Crystal Reports
Yakha entsha, usebenzisa i-Report Wizard, Standard, ODBC (ADO), iBentley I-model. Emva koko ukhethe ifayile ye-dgn, kwifolda apho i-ODBC iyalathisa khona.
Yinto elula (kakuhle, kungekhona kakhulu)
Kukho umzekelo weprojekthi ye-ADO.NET ku-C # engasebenza kunye ne-Visual Studio 2008, kwaye apho ibonisa indlela uphuhliso olusebenza ngayo isicelo esisebenzisana ne-I-model nge-ODBC. Oku, kuxhomekeke ekufakeni kwethu, kufuneka kugcinwe kwindlela:
C: \_ ProgramData \_ Microsoft \_ Windows \_ Qala Imenyu \_ Iinkqubo \_ Bentley \_ i-ODBC Umqhubi we-Windows 7 (beta)
Ndicinga ukuba isinyathelo esibalulekileyo kwiBentley, ukuzisa iDNG kufuphi nomsebenzisi. Kule meko, kukukwenza ifayile ye-dgn / dwg ifunde njengedatha; oko kuvula umnyango ukuyeka ukuwujonga njengefayile ye vector kwaye unokusebenzisana nayo ngokuqhagamshelanisa nezinye iinkcukacha ezisetyenziswe ezinye izicelo.
Post edlulileyo«Edlulileyo Geobide, ukusebenzisana ne-OGC idatha
Post Next Iingqungquthela zaseGuatemalan Surveying CongressOkulandelayo "